Imbali emfutshane kaSara Jessica Parker-Kim Cattrall Feud - Tv
Imbali emfutshane yoQhushululu phakathi kukaSarah Jessica Parker noKim Cattrall
Umhleli. Phawula: Eli nqaku lapapashwa okokuqala ngoFebruwari 12, 2018. Ngeendaba zokuba uKim Cattrall akazukuvela kwimvuselelo yeHBO Max Isini kunye neSixeko , Ihlaziyiwe ezantsi ngamangenelo amabini amatsha.
Kubadlali, ikhemistri enkulu kwiscreen ayithethi ukuba iguqulele kubuhlobo obukhulu ngaphandle kwescreen. Imbali yaseHollywood inamachiza ayityhefu, ahlala enezinto ezincinci, ezivela kuBette Davis noJoan Crawford kwiminyaka yama-60s ukuya kuPatrick Swayze noJennifer Grey kwii-80s ukuya kuLeonardo DiCaprio noClaire Danes kwiminyaka yama-90 ukuya kwiVin Diesel, uDwayne Johnson noTyrese kulo nyaka uphelileyo. Kodwa mhlawumbi akukho mbambano kwimbali yakutshanje eye yajika yaba yityhefu okanye yoluleke ngendlela engcungcuthekisayo njengaleyo ibiphakathi Isini kunye neSixeko Iindleko uKim Cattrall kunye noSarah Jessica Parker, abathi okwangoku bafanelwe lixesha labo likaRyan Murphy Uloyiko . Kule mpelaveki iphelileyo, uCattrall uphinde wavula ungquzulwano ngokuthumela kwi-Instagram ukuba uParker akangowasekhaya kwaye akanguye umhlobo wam.
ibhanana johnny kunye nesarah
Kufanelekile ukutsho Isini kunye neSixeko yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwimidlalo yeTV kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo. Yayiyinyani yokwenyani, enika ingxelo eqhutywa ngabasetyhini ngexesha apho ezo ntlobo zamabali zazinqabile kumhlaba kamabonwakude. Ifumene amaxesha amathandathu kunye neemovie ezimbini, uhlobo lwempumelelo leyo yenza uDan Harmon abe neentloni . Nangona kunjalo, kufana kakhulu nendlela yesantsya & nomsindo I-franchise ngoku iyanyanzeliswa ngenxa yempembelelo kuTyrese no-Dwayne Johnson's Insta-squabbles, Cattrall kunye noParker's feud konke kodwa kuphelile Isini kunye neSixeko cinema indawo yonke. Ngexesha elinye, isithathu I-SATC Imovie yayisebenza, kodwa ngoku kubonakala kungenakulindeleka. UDonald Trump kunye noKim Jong Un baya kuncoma omnye nomnye kuTwitter ngaphambi kokuba uCattrall noParker benze - zizinto ezixineneyo ngoku.
Ukufumanisa ukuba sifike njani apha, kwaye yintoni engahambanga kakuhle phakathi kwezi nkwenkwezi zimbini, kuyanceda ukwazi imbali, enzulu kwaye inengxabano. Ngaphandle kokuqhubela phambili, nanku umgca wexesha lomdlali weqonga ohlekisayo, onzima, onenkani kakhulu. Yiza neThermos yakho enkulu, le iti eninzi.
Ngo-2003 ukuya ku-044: Amanqaku eSihlandlo seXesha
Ngeli xesha, Isini kunye neSixeko yayisongele ukubaleka kwayo njengothotho kwaye ichola amanqaku ayo okugqibela eembasa ezivela kwiGlobal Globes nakwiimbasa zikaEmmy. Ngoku, mhlawumbi ndiyafunda naye kuninzi ekuphenduleni, kodwa xa iCattrall iphumelele umdlali weqonga ogqwesileyo kwii-Globhu zeHlabathi zika-2003 zeXesha lesi-5 kwaye babulela ngesisa iindleko zakhe, khange babonakale bonwabile. Jonga nje uCynthia Nixon, owayekhethwe kudidi olunye, xa uCattrall emcula ngokuba ambize ngentliziyo yam.
Umntu othile ukufanise nelona lungu libaluleke kakhulu emzimbeni womntu kwaye impendulo yakho kukuvuma ngokunqwala ?!
Ayizukuphelelwa lixesha, xa uCattrall ebulela uSarah Jessica Parker omkhulu, uSara Jessica Parker omkhulu wamjonga njengerobhothi ezibuyisa kwi-Intanethi IWestworld .
Oku kunokuba yinto ebangela ukuba i-Emmys yonyaka olandelayo, xa, ngokuka Umnxeba , UKattrall wayegqame [ehleli] yedwa ngexesha lomsitho. (Kwakuloo nyaka, uNixon wathatha uMlingisi oMxhasayo u-Emmy ngaphezulu kweCattrall.) Nangona kunjalo, okoko uthotho lwaluphelile ngelo xesha, kwabonakala ngathi ubundlongondlongo-ukuba babukhona ngelo xesha-bunokubekwa.
Ngo-2008: IiLunks eziDakumbileyo
Iminyaka emine isusiwe esiphelweni sothotho, lo ibingunyaka wokuqala Isini kunye neSixeko imuvi. Ingene ngaphakathi itoni yemali , kodwa Umnxeba uxele ukuba ngexesha lokufota, iingxabano zahlulahlula inqununu. KwakunguParker, uKristin Davis, kunye noNixon ngokuchasene neCattrall - ngokwelungu elinye labasebenzi, abanye abafazi babengavumi nokuhlala ne [Cattrall] ngexesha lesidlo.
Khawufane ucinge nje ngendlela ekungekho ngqiqweni ngayo oku ekufuneka kujonge ngayo ngelo xesha - amalungu amathathu aphambili angahoyi ixabiso lesidlo sasemini njengeePlastikhi Iintombi ezikhohlakele . (Ngaba uParker wayefuna ukuba uDavis noNixon banxibe ipinki ngolwe-Lwesithathu, kananjalo? Ngaba iCattrall yayisitya isidlo sasemini esibuhlungu kakhulu?) Ngenxa yoko kufanelekileyo, uDavis wayiphika le nto eyenzekileyo kudliwanondlebe luka-2010 UMarie Claire Ngokusisiseko esithi u-odole inkonzo yegumbi endaweni yoko. Xa ndibuya kwiseti, ndiza kuya ejimini kwaye ndifumane inkonzo yegumbi. Andinguye umntu onxibayo-onxibileyo-iimpahla-kwaye-aye-e-ihotele-yokutyela umntu, kodwa uKim, utshilo. Ngokuqinisekileyo uDavis wayezama nje ukucima amadangatye, kwaye uninzi lwento ayenzileyo, kodwa ukuba uzama ukufumana iingcebiso zokuthiya - into endiyiyo, kuba ukukhupha into encinci umntu kufuneka acinge kancinci - ungafumanisa kancinci yomthunzi kweso sicatshulwa. Owu, uKim Cattrall kunye naye LUNCHES LANCES .
Ngapha koko, kwakudliwanondlebe olufanayo, uNixon wongeze, Akuzange kube lula ukuhamba ngenqanawa, kodwa uluvo lokuba ngandlel 'ithile sichasene luyamangalisa. Kwaye iCattrall yayishwankathela ngcono Umnxeba : Ngaba ngabahlobo bethu abakhulu? Hayi. Singabadlali beqonga. Sinobomi bethu obahlukileyo. Ubomi, ngokucacileyo, obufuna uku-odola inkonzo yegumbi endaweni yokutya ngaphandle kunye nefrenemy yakho.
2009-10: Ngokwenyani, yonke into ilungile
Ukukhokela ukuya kwesibini Isini kunye neSixeko Umboniso bhanyabhanya, bobabini uParker kunye noCattrall bawasusa amarhe okuba abavumelani ngelixa babefota uthotho. Andiqondi ukuba kukho umntu ofuna ukukholelwa ukuba ndiyamthanda uKim, utshilo uParker It ngo-2009. Ndiyamthanda. Ngendingazange ndiyenze imovie ngaphandle kwakhe. Khange ayenze kwaye ngekhe. Ukongezwa kweCattrall ngo-2010, ethetha no UMarie Claire : Umatshini wokushicilela kufuneka abeke abantu basetyhini kwezi bhokisi, kunokuba ubabonise njengoko i-movie ibabonisa: ukusebenza kunye nokuba namandla. Izinto nje kufuneka ziqhushumbe ngaphandle kwaso nasiphi na isizathu ngaphandle kweengcinga zabantu.
Ngaphandle kweepesenti ezili-16 ezibolileyo kwiitamatisi ezibolileyo, ukungena kwi 146 imizuzu , kunye ukuphumelela iiRazzies ezintathu , Ukwabelana ngesondo kunye neSixeko 2 wayenjalo enye ibhokisi ofisi hit . Yonke into iphela kakuhle, kwaye uCattrall noParker babonakala bekhwela entlango yaseDubai kwi-camelback kunye neengxowa zemali kunye ne-feud kwi-backburner. Ke ngoku …
I-2016-17: I-Movie yesithathu, uKim ufuna ukuphuma, umthunzi uphonsa
NgoDisemba 2016, Radar kwi-Intanethi ibango lesithathu Isini kunye neSixeko Umboniso bhanyabhanya wawusendleleni, kunye nokufota okwakwenzeka ehlotyeni lika-2017. Ingxelo ayiqinisekiswanga, kodwa uParker wamisa umlilo ngo bahlekisa ngemovie yesithathu lonke ithuba wafumana.
Nangona kunjalo, ngoSeptemba 2017, uParker waqinisekisa Ngaphezulu ukuba imovie yesithathu ibingenzeki. Ndididekile, utshilo. Besinayo le nto intle, ihlekisayo, ibuhlungu, yonwabile, iskripthi esinomdla kakhulu kunye nebali. Ayidanisi nje into yokuba singafumani mabali kwaye sinamava, kodwa ngakumbi kwabo baphulaphuli bebelilizwi lokufuna enye imovie.
Le ngxelo yayingenabungozi ngokwaneleyo; UParker wayecaphukile ngokucacileyo ukuba babengenzi enye imovie, kodwa wayengabizi mntu ngegama. Nangona kunjalo, ngala mhla uParker wathetha naye Ngaphezulu , Imeyile yemihla ngemihla uxele ukuba izicwangciso zokwenza i-movie yesithathu ivaliwe ngenxa yeemfuno ezithe kratya zeCattrall - ngaphambi kokuba avume ukuthatha inxaxheba, uxele ukuba uWarner Bros. naye avelise ezinye iiprojekthi awayeziphuhlisa. Ngosuku olulandelayo, uCattrall waphendula Imeyile yemihla ngemihla Ingxelo ngokuyibiza ngokuba * sisigebenga emoji *. (UCher angazingca ngale nto Sebenzisa i-emoji .)
Woke 2 a @MailOnline Isaqhwithi! Ekuphela 'KOKUFUNEKA' endikhe ndakwenza kukuba andifuni ukwenza ifilimu ye-3rd .... kwaye yayibuyele kwi-2016
-Kim Cattrall (@KimCattrall) NgoSeptemba 29, 2017
Siyaqala nje. Oko kwangaloo mini , eziphindaphindayo Isini kunye neSixeko Umlingisi uWillie Garson - owayedlala uStanford Blatch, umhlobo osisitabane kaParker kaCarrie Bradshaw - ophethe i-Cattrall ngolona hlobo lubalaseleyo:
Balandeli abathandekayo, kuba 'ndiyityhefu', ndiza kuthetha-thethana ngekhontrakthi yeenyanga ezi-6, ndingafikeleli kwimigangatho, emva koko nditsho ukuba andikaze ndifune ukuyenza.
-Willie Garson (@WillieGarson) Okthobha 4, 2017
Ukuphoxeka kubo bonke abasebenzi ababambe uthethathethwano lokugqibezela imisebenzi yabo, kwaye kunjalo, kubalandeli. Yiyeke ngeloxesha. #Yinyaniso
-Willie Garson (@WillieGarson) NgoSeptemba 29, 2017
Kwinyanga elandelayo, Cattrall wahlala phantsi troll yabantu Piers Morgan ukunika icala lakhe ebalini. Kodwa endaweni yokucoca umoya-njengoko abantu abadumileyo besenza kwezi ntlobo zodliwanondlebe-uCattrall waphosa i-grenade kwimfumba ye-TNT. Ngokwenene kulapho ndithatha khona ukunika abantu uxanduva Isini kunye neSixeko Ngokukodwa uSarah Jessica Parker kuba ndicinga ukuba angangcono, utshilo uCattrall. Ndicinga ukuba ngewayengcono. Andazi ukuba yintoni umba wakhe. Oh ikaka. Kukho imigaqo yokudlala ngokufanelekileyo kubukrelekrele boosaziwayo, kwaye mhlawumbi eyona inkulu kukuba ungazibizi ngamagama. Umdlalo okweli nqanaba ukwi-DEFCON 3, kuba uCattrall wabiza elo gama, indoda. Izinto zinokumnyama kuphela ukusuka apho.
2018: Kulungile, sikwi-DEFCON 1
Kwaye uyazi ntoni - izinto ziye zaba mnyama. UParker uqale unyaka ngokuthetha nokuwa kweCattrall Bukela kwenzeka ntoni Phila noAndy Cohen, NGOMDLALO owona mboniso ubambekayo ebusuku. Ndiyifumene ikhathazekile kuba ayisiyondlela endikhumbula ngayo amava ethu, utshilo uParker. Kubuhlungu. Kwakhona, uParker wasilela ekubeni ngoonozakuzaku, engathethi kwanto eyathuka ngokucacileyo iindleko zakhe zangaphambili. Mhlawumbi wayekhathazeke ngokunyanisekileyo ngasemva nangaphambili kunye nendlela izinto ezimbi ezijike ngayo; mhlawumbi wayezama ukuzenza ukuba abukeke eluntwini- mhlawumbi yayizizinto zombini. Nokuba yeyiphi, le yayingeyonto inokutsha ngokutsha.
Izinto azizange zihambe ngokugqithiseleyo kude kube ICattrall ibhengeziwe ekuqaleni kukaFebruwari ukusweleka komnakwabo, uChris. UParker uvakalise amazwi ovelwano ngokusweleka kweCattrall, Zombini kudliwanondlebe kwaye uqhubeke Imidiya yokuncokola . Kulapho uCattrall wakrwela khona umgca.
Ukufikelela kwakho ngokuqhubekayo sisikhumbuzo esibuhlungu sendlela okhohlakele ngayo kwaye ngoku, uCattrall ubhale kwi-Instagram iposti ngoMgqibelo. Mandiyenze icace KAKHULU le. (Ukuba andikabikho) Awunguye usapho lwam. Awunguye umhlobo wam. Ke ndibhalela ukukuxelela okokugqibela ukuba uyeke ukuxhaphaza intlekele yethu ukuze ubuyisele 'intombazana yakho entle'.
Umama undibuze namhlanje Iza nini @sarahjessicaparker, la mhanahanisi, akushiye wedwa? Ukufikelela kwakho ngokuqhubekayo sisikhumbuzo esibuhlungu sendlela okhohlakele ngayo ngelo xesha nangoku. Mandiyenze icace KAKHULU le. (Ukuba andikabikho) Awunguye usapho lwam. Awunguye umhlobo wam. Ke ndibhalela ukukuxelela okokugqibela ukuba uyeke ukuxhaphaza intlekele yethu ukuze ubuyisele 'intombazana yakho entle'. Khuphela kwaye uncamathisele ikhonkco https://nypost.com/2017/10/07/inside-the-mean-girls-culture-that-destroyed-sex-and-the-city/
Iposi ekwabelwana ngalo ngu UKim Cattrall (@kimcattrall) ngo-Feb 10, 2018 kwi-5: 20 am PST
I-Cattrall iphelile isithuba ngokudibanisa INew York Post Ibali elisuka ku-Okthobha elixhasa ntoni Umnxeba wayexelile ngaphambili, ukuba inkcubeko yamantombazana amancinci kwiseti yayinenye inkcitho eshiya iCattrall ngaphandle kubanda.
(Kwaye okokugqibela, ngoMvulo, umlingani kaParker uqhubeke Uqhawulo-mtshato , UMolly Shannon, Nditsho UParker uyayixhasa, kuba le mbambano ifikelela kude kangangokuba noMary Katherine Gallagher uyangena kuyo.)
[ Ukuphefumla nzulu ]
Kwaye kulapho sikhoyo ngoku. Akukho mntu uphuma kule nto ekhangeleka ilungile. Andikwazi ukugxininisa ngokwaneleyo: Yonke le nto ayikho kulawulo, kunye nexesha leParker-Cattrall Uloyiko yinto sonke esiyifaneleyo, kunye noRyan Murphy ukutsala iClint Eastwood kunye nokuvumela abadlali ukuba badlale ngokwabo. Andikwazi kulinda ukubonakaliswa kwakhona kwezinto ezinqabileyo, ngexesha lokutya.
Uhlaziyo, Jan. 12, 2021:
2019: Nditshintshe nje, iiCowards -Kim Cattrall, Ngokusisiseko
Kwi Udliwanondlebe olubanzi kunye UMgcini ngo-Agasti 2019, uCattrall wayenza yacaca gca into yokuba ugqibile ngendima yakhe edumileyo. Ndadlula entanjeni ndidlala uSamantha Jones kuba ndandithanda Isini kunye neSixeko , uthe. Kwakuyintsikelelo ngeendlela ezininzi kodwa emva kwefilimu yesibini ndandanele. (Lenze njalo nehlabathi liphela, ngokucacileyo: Ukwabelana ngesondo kunye neSixeko 2 une Iipesenti ezili-16 zokuvunywa kukwamkelwe kwiitamatisi ezibolileyo .)
Kwaye ngelixa uCattrall engakhange athethe naye nawuphi na umntu awayekunye naye ngokukodwa-ayikuko ukuba wayefuna unyaka emva konyaka Iposti ye-Instagram apho wathi uSarah Jessica Parker ayinguye usapho okanye umhlobo wakhe-umdlali weqonga uhambe irekhodi evuma uluvo lokuba umntu kufuneka aphinde aphose isimilo sakhe. Andikwazi ukuqonda ukuba kutheni bangasuki bathathe omnye umdlali endaweni yokuchitha ixesha lokuxhaphaza, wongeze watsho. Hayi ayikho.
[ Icoca umqala. ] Bukela esi sithuba.
2020: Kwaye ngokufana nje…
Nge-10 kaJanuwari, i-HBO Max, eyinkxalabo kodwa isezantsi isitshixo se-bang-for-your-buck-service, ibhengeze ukuba Isini kunye neSixeko Imvuselelo iyenzeka-kunye nomqolomba. Zintathu kuphela iinkwenkwezi zantlandlolo ezine ezibuyayo Kwaye Kanye Nje . (ISidenote: Sifuna uphando lwangaphakathi lokuba kutheni le nto ingazukubizwa Khange ndikwazi ukunceda kodwa u Wonder .) Ukubambelela? Uqikelele: Kim Cattrall.
uthatha ipilisi eblue
Ngaphandle kwesini Samantha ngesondo ekuvuseleleni uthotho olwabethayo apho isini yayiligama lokuqala lesihloko sayo, Isini kunye neSixeko abalandeli bacaphukile. (Ayikuko ukuba uCattrall ebeya kufuna ukuba yinxalenye yayo; wenza ngokungqalileyo ukuba bathathe indawo yakhe kunyaka ophelileyo.) 'Ukwabelana ngesondo kunye nokuVuselelwa kweSixeko kufuneka kwenziwe idilesi yokuCima uMntu oNgcono ngezeSondo ngeyona ndlela Umxholo oyintloko wothando olunomdla nolukholisayo Ezahlukeneyo ikholamu ; Akukho 'Zesondo kunye neSixeko' Ngaphandle kokuphikisana kukaSamantha Amatye agiqekayo ; Nceda uyeke 'ukulala ngesondo kunye neSixeko', i INew York Post Ubongoza ngokungqalileyo.
Ukwabelana ngesondo kunye neSixeko ukuqala kwakhona ngaphandle kukaSamantha kufana nokudibana kwabafazi beSpice ngaphandle kwePosh. Indenza sideeye sobabini ngokungathathi kwaye ngokuqinisekileyo ayizukufana, kodwa siya kuthatha into esinokuyifumana x
Yamkelani (@yamkelani) NgoJanuwari 11, 2021
UKim Cattrall ngumhlobo ophindaphindiweyo kwi-cinema kwaye ukholelwa kumava emidlalo yeqonga. Inyala kuwe @iqosweb . Akukho Samantha akukho sex kunye neSixeko. @mzokoloko
Isilayidi eskrinini (@ScreenSlate) NgoJanuwari 11, 2021
Ngelixa uhlekisa ngothotho olutsha olunomda kwi Iposti ye-Instagram , UParker ubhekise kwindlovu esegumbini, esithi iCattrall ayizukuba yinxalenye yokuqalisa kwakhona kuba abadlali ababini banobudlova obupapashwe kakhulu. Andimthandi, wabhala uParker. Zange nditsho. Andisoze. USamantha akayonxalenye yeli bali. Kodwa uya kuhlala eyinxalenye yethu. Khange ndikwazi ukuzibamba ndizibuze… ukuba ngaba konke oku kukuzibandakanya.
Iintloko zeedolophu zekansas zibambe umnxeba
ngaba i-moviepass isasebenza
Eyona midlalo bhanyabhanya imbi kakhulu
ukuphambana kwamadoda amandla